Iindaba zesiXhosa, ngo12:00, 29 eyomqungu 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, ngo12:00, 29 eyomqungu 2019
Written by Ashia Nkontsa on 29/01/2019
Isikolo iDu Noon sijamelene namatyala amanzi
Sijamelene netyala lamanzi elimalunga nesiqingatha sesigidi seerandi isikolo samabanga aphantsi i-Sophakama Primary eDu Noon. Oku kuza emva kokuba abahlali abangene kumhlaba kamasipala olibala lezemidlalo elisemva kwesikolo betsale amanzi kwesi sikolo. Aba bahlali bebefudula bengabenxusi eDu Noon baza bamisa amatyotyombe abo kwibala lezemidlalo ngenyanga yoKwindla ngo2017. Abanye babo bathi bebethwaxwa kukungabi namali yokuhlawula i-rent lo gama abanye begxothwe ngabanini bemizi abatsha emva kokuthengiswa kwayo. Inqununu yesi sikolo umnumzana Sabelo Makhubalo uthi wothuke woma akubona ubungakanani beli tyala nanjengoko livamise ukuba phakathi kwamashumi amabini namashumi amabini anesihlanu amawaka eerandi ngenyanga. Uthi uye wayibika kwisixeko nakwisebe lezemfundo lephondo le nyewe ngokunjalo noceba weWadi. Usomlomo wesebe unkosikazi Bronagh Hammond uthi isebe lizakubathibaza abahlali ekusebenziseni amanzi wesikolo.
Kukho orhaneleka uba uzobhukuqa uMaimane esihlalweni
Kuvele iingxelo zokuba kukho oothile kwiqela leDA abafuna ukugula inkokheli yeli qela umnumzana Mmusi Maimane esihlalweni. Ezi ngxelo zidizwe ngobesakuba ngumbhexeshi oyintloko weli qela kumasipala waseMfuleni umnumzana Simon Nkosi emva kokulahla kwakhe kwesi sikhundla kwiveki ephelileyo. Le ndedeba ibanga ngelithi iyehla inkxaso ngakuMaimane ngaphakathi kulo mbutho kwaye ngokweengxelo zephephandaba i-City Press kukho abathile abamemelela ukuba kubanjwe inkomfa ekhawulezileyo. Eyona nto azakuhlolwa ngayo okaMaimane kukuba unakho kusini na ukuzisa amanani angaphezu komyinge wamashumi amabini anesibini ekhulwini obuzuzwe leli qela kulonyulo lango2014. Umnumzana uNkosi uthi uphelelwe lithemba ngakweli qela kwakunye noMaimane kwaye unenkolo yokuba iqhinga lokuguzulwa kwale nkokheli lalisele liphekiwe ngaphambi kokonyulwa kwakhe kwakhona kunyaka ophelileyo.
Bavuke benxunguphele abasasazi beSABC namhlanje
Bavuke benonxunguphalo namhlanje abasebenzi bequmrhu losasazo lelizwe loMzantsi Afrika i-SABC emva kokungahlawulwa kwemivuzo yabo. Abeendaba bakwa-Eyewitness News badize ukuba bafumene iminxeba yabasebenzi beli qumrhu abakruqukileyo besithi bebelindele ukufumana intlawulo yabo namhlanje koko basajonge enkalweni. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo igosa eliyintloko kwaSABC umnumzana Madoda Mxakwe uxelele ipalamente ukuba eli qumrhu likwingxingongo yomhadi wokushokoxelwa yimali kwaye lingangabinakho ukuhlawula abasebenzi kwezi nyanga zimbalwa zizayo. Ukanti noko kunjalo le nkampani isathe xha ngokudenda abasebenzi de kuqukunjelwe ukutyunjwa kwebhodi entsha yolawulo.
Abasemagunyeni kwiqumrhu losasazo lelizwe loMzantsi Afrika babaqinisekisile abasebenzi ukuba intlawulo yabo bazakuyifumana namhlanje. Bebenonxunguphalo namhlanje abanye babasebenzi be-SABC emva kokungahlawulwa kwemivuzo yabo. Abeendaba bakwa-Eyewitness News badize ukuba bafumene iminxeba yabasebenzi beli qumrhu abakruqukileyo besithi bebelindele ukufumana intlawulo yabo namhlanje koko basajonge enkalweni. Ukanti abasemagunyeni bathi unobangela wolu libaziseko lubangelwe yibhanka. Kusenjalo…Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo igosa eliyintloko kwaSABC umnumzana Madoda Mxakwe uxelele ipalamente ukuba eli qumrhu likwingxingongo yomhadi wokushokoxelwa yimali kwaye lingangabinakho ukuhlawula abasebenzi kwezi nyanga zimbalwa zizayo. Ukanti noko kunjalo le nkampani isathe xha ngokudenda abasebenzi de kuqukunjelwe ukutyunjwa kwebhodi entsha yolawulo.
Luyaqhubeka uqhanqalazo lwe Fees must fall
Ibethe ngenqindi etafileni inkokheli yoqhankqalazo lokugunyazisa imfundo ephakamileyo yasimahla kwilizwe loMzantsi Afrika i-Fees Must Fall umnumzana Bonginkosi Khanyile ngelithi uzakuqhubeka nedabi lemfundo yasimahla kananjalo akukabikho nguqu ingako kwezemfundo…KHANYILE on fees…Uthi unanamhla oku abafundi bayajikiswa kumaziko-mfundo enomsila xa sukuba bengenamali yokuhlawula kwaye eyona nto kwaye into yemfundo yasimahla kuRhulumente iyintetha nje engade imiliselwe. OkaKhanyile ukuthethe oku emva kokuthiwa nka ngesigwebo seminyaka emithathu ephantsi kweliso elibukhali lamadindala ngenxa yendima yakhe kuqhankqalazo lango2016 lababafundi olwalambethwe zizixholo-xholo. Umnene lo ufunge ngelithi umsulwa kwityala lodushe lwasesidlangalaleni,ukufeda ukuthobela umyalelo wamapolisa kwakunye nokufunyanwa enesixhobo esinobungozi. Kungokunje, isigwebo sakhe simgunyazisa ukuba asoloko esekhayeni lakhe kananjalo kufuneka athabathe inkxaxheba kwimisebenzi yeenkonzo zoluntu aze angene nakwiinkqubo zokumxhobisa ngobomi kwakunye nokuthozama.